Ogaden News Agency (ONA) – Dhismaha Dhaamka Wabiga Niil ee Ethiopia oo markale Khilaafkiisi Cirka isku shareeray saaka
Dhismaha Dhaamka Wabiga Niil ee Ethiopia oo markale Khilaafkiisi Cirka isku shareeray saaka
Posted by ONA Admin	/ May 26, 2014
Dowlada Masar ayaa olole weyn u gashay sidii ay u hor istaagi laheyd ama hakad u galin laheyd dhismaha Biyo Xidheenka Wabiga Niil ee Ethiopia wado. Hadaba siyaasadii iyo ololihii nabadeed ee dowlada Masar waday waxaa dhag u dhigi wayday dowlada Ethiopia. Waxayna maanta Ethiopia ku dhawaaqday in dhismaha Biyo Xidheenka Wabiga Niil sidii loogu talo galay uu kusocon doono.
2 May 2014 ayaa Wasiirka Biyaha, Beeraha iyo Tamartu uu shir ka sheegay in Dowladiisu dhameys tiri doonaan dhismaha Biyo xidheenka Abbay sidii loogu talo galay ee loo qorsheeyay. Dhismahaasi oo soo afjarmi doona Sanadka 2017.
Dowlada Masar ayaa aad uga cadhootay Madax adeyga taliska macangaga ah ee Woyanaha, waxaana laga yaaba sida siyaasiyiinta iyo Khubarada ku xeel dheer arrimaha Biyaha ay sheegayaan Daggaalkii Biyaha ee Adduunku innuu ka qarxi doono Wabiga Niil, Dowlada Masar ayay ka go’antahay talaabo kasta oo ay ku joojin karto biyo xidheenkaas inay qaataan. Waxaana hada miiska u saaran talaabo Military hadii Ethiopia dhageysan waydo wada xaajoodka.
Dowlada Ethiopia oo cabsi badan ka qaaday wadanka Masar ayaa bilowday inay dhamaanba Ganacsatada ree Masar ee ku sugan Addis Ababa iyo guud ahaanba Ethiopia inay indho gooni ah ku eegaan iyaga oo bilaabay masaafurin ay u geysteen dad badan oo u dhashay masar oo caan ka ahaa Ethiopia.
Wabiga Niil ayaa kasoo fataha wadamo Badan oo Wadanka Ethiopia kamid tahay. Marar badan ayaa lagula taliyay Wadanka Ethiopia inaysan isku taaban Biyaha Wabiga Niil. Hadey u baahdaana inay isticmaalaan wabiyaasha kale ee faraha badan ee Ethiopia ku yaala.